करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु – Rajmarg Online
दाङ, पुस १३ । दाङमा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ चैनपुरमा करेन्ट लागेर २८ बर्षीय शंकर चौधरीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रबक्ता रामप्रसाद घर्तिले जानकारी दिनुभयो ।
घोराहीबाट जन्द्रागाउँतर्फ जादै गरेको रा १ ख ४६८ नं. को बस रोकेर सामान झार्ने क्रममा बसको साहु घोराही उपमहानगरपालिका १७ बस्ने चौधरी विजुलीको तारमा छोईएर मृत्यु भएको हो । चौधरीको उपचारको लागि राप्ती स्बास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याउने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ ।
यसैविच दाङको लमही नगरपालिका वडा नं. ५ बसपार्कमा एक पुरुषको शव भेटिएको छ । नाम थर नखुलेको तराई मुलको जस्तो देखिने अन्दाजी ४५÷४६ को पुरुषको भेटिएको प्रहरीले बताएको छ । मृतक पुरुष केही बर्ष देखि सोही स्थानमा मागेर खाने बस्ने गरेको भन्ने बुझिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बताएको छ ।